စမတ်နည်းပညာသုံး ကုန်သိုလှောင်စင်တာ - Xinhua News Agency
တုန်းကွမ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ၏ အီလက်ထရောနစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် JD.com ၏ စမတ်နည်းပညာသုံး ကုန်သိုလှောင်ရုံ စင်တာဖြစ်သည့် Dongguan ကုန်သိုလှောင်ရေးစင်တာသည် အာရှတိုက်၏ နံပါတ် ၁ လုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီး အာရှတိုက်အတွင်းအကြီးဆုံးစမတ်နည်းပညာသုံး သိုလှောင်ရုံတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
စင်တာတွင်းပို့ဆောင်ခြင်း၊သိုလှောင်ခြင်း ၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြင်းမှစကာ ပြင်ပသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ဆောင်မှုအထိ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
စင်တာတည်ဆောက်ရေး အကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းမီတာပေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ရှိပြီး ပေကျင်းရှိ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ ဖြစ်သည့် “Bird’s Nest” ၏ နှစ်ဆခန့်ကြီးမားသည်။
တစ်နေ့လျှင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု စွမ်းအင် ၁.၆ သန်းရှိသည့် Dongguan သည် အာရှတိုက်၏ နံပါတ် ၁ ကုန်သိုလှောင်စင်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် JD ကုမ္ပဏီ၏ ၂၅ ခုမြောက် စမတ်နည်းပညာသုံး ကုန်သိုလှောင်ရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကြီးမားသည့် ကုန်သိုလှောင်ရုံတွင် အလယ်အလတ်အရွယ်အစားကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် သန်း ၂၀ ကျော်ကို သိုလှောင်နိုင်သည်။
ယင်းစင်တာ၌ တစ်လုံးလျှင် ၂၂ မီတာအမြင့်ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့်စက်အလုံးရေ ၇၈ လုံးနှင့် ကုန်စည် အမျိုးအစားခွဲကာ သယ်ယူသည့်စက်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ကုန်စည် ပါဆယ်များကို ထိရောက်စွာ ပို့ဆောင်နိုင်သည်။
စင်တာ၌ စက်ရုပ်များစွာနှင့်အလိုအလျောက် လည်ပတ်သည့် ကိရိယာများစွာကိုလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည်။
စင်တာ၏လည်ပတ်မှုကြောင့် ပို့ဆောင်မှုအချိန်ကို ပိုမိုတိုတောင်းစေခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းခွဲဝေချထားမှုနှင့် ကုန်စည်များကိုသင်္ဘောတင်ပို့ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
JD Logistics ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံတွင် အဓိကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာသည့် Dongguan မြို့ သည် ပုလဲမြစ်ဝှမ်းဒေသတွင်တည်ရှိပြီး အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ လက်ပ်တော့များ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့် သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် အဓိက လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
DONGGUAN, Nov. 25 (Xinhua) — Dongguan “Asia No. 1,”asmart logistics center of China’s e-commerce giant JD.com, is believed to be the largest smart warehouse in Asia.
The center covers the entire supply chain process from inbound delivery, storage, packaging, and sorting, to outbound transportation.
The construction area of 500,000 square meters is twice the size of the “Bird’s Nest,” the National Stadium in Beijing.
Featuringaprocessing capacity of 1.6 million ordersaday, Dongguan “Asia No. 1” is JD’s 25th smart logistics center across the country.
This gigantic warehouse can store more than 20 million medium-sized items.
Here, 78 stacking machines, each 22 meters high, and over 800 sorting conveyors can efficiently deliver parcels to logistics centers nationwide.
The center also features the large-scale use of robots and automated equipment.
The operation of the center has largely shortened delivery time and improved allocation and transshipment efficiency in south China.
Asacore city in JD Logistics’ business layout, Dongguan is located in the Pearl River Delta region,amajor production base of home appliances, smartphones, laptops, computers, and sanitary products.